Ama-pesticides, afaka izinambuzane, ama-fungicides, ama-herbicide, izithasiselo kanye neziphakamiso zingasetshenziswa kuphela ngezinhloso eziboniswe emalebula abo. Njengoba akekho obhalisiwe ngokubulala izidumbu, akuvumelekile ukusebenzisa noma ukuxuba kwale mikhiqizo ukubulala noma ukuphatha izidumbu. Ngisho nokuthenga noma ukuthengisa imikhiqizo enjalo ngenhloso yobuthi obushushu kuyisenzo esibi kakhulu sobugebengu.
Inkinga yokuqala enobuhlungu ukuthi akuyona into eqondile, ngakho-ke kokubili kokulimaza okubangelwa nokungawona umonakalo obangela izilwane zingabulawa kule nqubo. Isikhundla esiqenjini esinqunyiwe singase siphazamisekile, lapho kungabonakali ukulimala abantu beqembu ukuthi bathole ubuthi, okubangele ukulimala okwenza izilwane manje ziholele.
Ngaphandle kwalokhu, ezinye izilwane, ngokuvamile izilwane ezisengozini, njengamaxhaphozi kanye nama-raptors, zingathinteka, ngokuxhumana ngqo noma okungaqondile ngqo nobuthi lapho udla isilwane esinobuthi.
Ukusetshenziswa kwama-collars, agcwele i-Sodium monofluoroacetate (1080) ukuqeda i-jackal kanye ne-caracal emnyama ehlukile kulo mthetho, ngokusho kwe-Predation Management Forum. Kodwa-ke, akekho omunye umuthi ongasetshenziswa kulezi collars kanti amakolishi kudingeka adaliswe futhi ahlinzekwe ngabanikezeli abanelayisensi ngokulandela uMthetho Wezingozi, ka-15 ka-1973.
Ama-collars kufanele futhi asetshenziselwe kuphela emfuyweni encane ukulawula i-jackal kanye ne-caracal emnyama lapho amanye amasu engasebenzi. Emagodini lapho kunengozi enkulu yokudliwa, isithangami sinxusa abalimi ukuba bavumelane namawundlu amancane amancane ngekolishi eliyingozi bese uwafaka ezigodini ngezimvu ezikhulile.
Inzuzo yale ndlela yukuthi yizilwane eziduni kuphela ezibamba izimvu nezimbuzi ziyobulawa yi-collars enobuthi. Izidakamizwa ezinobuthi kumele zingcwatshwe ngokujulile noma zishiswe ukuvimbela ezinye izilwane ukuba zibuye zithole ubuthi.
Okunye okungafani nokubusa yi-Coyote getters-idivaysi esetshenziselwa ukubulala izilwane ezihlosiwe ngokudubula i-cyanide emlonyeni wesilwane uma iphazamisa ukuhlambalaza. Nakuba lokhu kungenye yezindlela eziphumelele kakhulu zokubhekana nezinja eziphazamisayo, akuyona indlela ekhethiwe futhi kungakhokelela ekufakeni ubuthi bezinye izinhlobo, ikakhulukazi izilwane ezincane.
Abalimi kudingeka bathole imvume edingekayo evela kwi-Provincial Nature Conservation Authority ukusebenzisa amakolishi enobuthi noma ama-coyote getters. Igunya lizoba nemibandela ethile yokukhishwa kwemvume, umnikazi wephemithi okumelwe alandele kule ncwadi. I-Coyote getters kufanele ihlelwe nguMnyango Wezokugcinwa KwesiFundazwe ukuqinisekisa ukuthi ihambisana nazo zonke izidingo kanye nokuziphatha.